ယူနိုက်တက်စတိတ် ဖလော်ရီဒါ မိုင်ယာမီ
လိပ်ပြာကမ္ဘာ့ဖလားတောင်ပိုင်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ဧည့်သည်များနှင့်နေထိုင်သူများသဘာဝတရား၏ဂုဏ်အသရေနေရခြင်းတစ်ရက်ဖြုန်းဖို့ထူးခြားတဲ့လမ်းပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါပန်းခြံကိုအမြဲအနည်းဆုံး 10000 လိပ်ပြာရတာဟာနှင့်မကြာခဏရှိပါတယ်အများအပြားကပိုလှည့်ပတ်ဆွဲထား - ကလိပ်ပြာရေတွက်ဖို့ခက်ခဲပဲ!
ဒါဟာဖြစ်စေရုံလိပ်ပြာမဟုတ်ပါဘူး။ လိပ်ပြာကမ္ဘာ့ဖလားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အကြီးဆုံးအခမဲ့-ပျံသန်းငှက်ပိတ Aviary မှမူလနေရာဖြစ်သည်။
အချို့သောရာသီအလိုက်နှင့်ယခုနှစ်အားလုံးစိတျအပိုငျးမြားမှမမြင်နိုင်ဖြစ်ကြပေမယ့်လိပ်ပြာကမ္ဘာ့ဖလား, လိပ်ပြာ၏ 150 ကျော်မျိုးစိတ်မှမူလနေရာဖြစ်သည်။
အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုသင်သွားရောက်လည်ပတ်ဘယျအခြိနျ, သင်ဆွဲဆောင်မှုရဲ့ပြင်ပ Aviary အတွက်လိပ်ပြာ၏ 50 လောက်မျိုးစိတ်မြင်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ အတွေ့အကြုံများထဲမှ-of-a-မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးတိရစ္ဆာန်ရုံထဲမှာလိုအဖြစ်အဲဒီအစားသက်သေခံပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှုခြင်းထက်, သင်တို့ကိုတိုက်ရိုက်လိပ်ပြာနေရင်းဒေသများတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ကြသည်။ အဆိုပါ Aviary အလွန်မြင့်မားခြံစည်းရိုးရှိသည်နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့မှတဆင့်လမ်းလျှောက်နိုင်ကြသည်။ လိပ်ပြာသင်တို့အပေါ်မှာလေယာဉ်ဆင်းသက် start လျှင်အံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်! ထိုင်နေနှင့်အပန်းဖြေခြင်းနှင့်သဘာဝ Butterfly ကကမ္ဘာ့ဖလားမှာသင်နှင့်သင့်မိသားစုညှို့ကြကုန်အံ့။
အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ Butterfly ကကမ္ဘာ့ဖလားမှပေးဆောင်ဝန်ခံချက်နှင့်အတူအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
လိပ်ပြာကမ္ဘာ့ဖလားအုန်း Creek အဘိဓါန်အတွက် 3600 အနောက်နမူနာလမ်းမကြီးပေါ် Tradewinds Park မှာတည်ရှိပါတယ်။
အဲဒီမှာရဖို့, ယူ ဖလော်ရီဒါရဲ့ Turnpike နမူနာလမ်းမကြီးပေါ်တွင်အနောက်ဘက် 39. ခရီးသွားမှထွက်ရန်နှင့်သင်အနောက်ဘက် turnpike ၏ Tradewinds Park ကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လေးပုံတစ်ပုံတစ်မိုင်ကိုတွေ့လိမ့်မည် 69 သို့မဟုတ် Interstate 95 မှထွက်ရန်။ ဖြောင့်ပန်းခြံသို့ခရီးသွားခြင်းနှင့်သင်ပန်းခြံသို့ Butterfly ကကမ္ဘာ့ဖလားတစ်မိုင်၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သုံးပုံတစ်ပုံကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
သင် Sawgrass အမြန်အပေါ်ခရီးသွားလာနေလျှင်, ထွက်ပေါက် 19 (လီယွန်လမ်းမကြီး) ယူနှငျ့သငျနမူနာလမ်းမကြီးရောက်ရှိသည်အထိတောင်ဘက်မောင်းတယ်။ သငျသညျ Tradewinds ပန်းခြံကိုတွေ့မြင်သည်အထိနမူနာများနှင့် drive ကိုပေါ်သို့အရှေ့ပါ။ ဖြောင့်ပန်းခြံသို့ခရီးသွားခြင်းနှင့်သင်ပန်းခြံသို့ Butterfly ကကမ္ဘာ့ဖလားတစ်မိုင်၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သုံးပုံတစ်ပုံကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
2018 ၏9အကောင်းဆုံးဘတ်ဂျက်မိုင်ယာမီကမ်းခြေဟိုတယ်
မိုင်ယာမီအတွက်မတ်လ - Calle Ocho ပွဲတော် 2015
Shalimar Point ဂေါက်ကလပ် - ဝိန်း Fort ဝေါ်လ်တန်သဲသောင်ပြင် - ဖလော်ရီဒါ
Long Island တွင်များ၏စက်ရုံ Hardy ဇုန်
အဘယ်အရာ Zika ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပြီးသင်ကစိုးရိမ်စရာသငျ့သလော
မေရီလန်းအရောင်အသွေးစုံထမ်းရွက်ကျဆင်း 2018: စန္ဒီပွိုင့်နိုင်ငံတော်ပန်းခြံ
ဗင်းနစ်, California မှာလုပ်ပါအရာ
Boca del Toro ဖို့ San Jose မှစ. Get လုပ်နည်း